Semalt विशेषज्ञ: खोजशब्दहरूको बारेमा About झूटा तथ्यहरू
एसईओमा कुञ्जी शब्दहरूको बारेमा धेरै मिथ्याहरू छन्, र अधिक व्यक्तिहरूले तिनीहरूलाई सत्यता फेला नपारिकन विश्वास गर्दछन्।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, लिसा मिशेल, keywords खोजशब्द गलतफहमीहरू वर्णन गर्दछ, सत्य प्रकट गर्दै।
मिथ्या १. अनसाइट एch्कर पाठ अब काम गर्दैन
यद्यपि धेरै मानिसहरूले सोच्दछन् कि एन्कर पाठ अब काम गर्दैन, तपाईं यो महसुस गर्नमा चकित हुनुहुनेछ कि लि link्क भवनको अभावमा पनि यसले अझ राम्रो श्रेणीकरणमा नेतृत्व लिन सक्छ। एch्कर पाठ अप्टिमाइजेसन अझै मान्य छ र र्या effectively्कि works वृद्धि गर्न प्रभावकारी रूपमा काम गर्दछ।
मिथ्या २. खोजशब्द अनुसन्धान अब महत्त्वपूर्ण छैन
जब तपाईले यो पत्ता लगाउन खोज्नु हुन्छ कि आगन्तुकहरूले के खोज्दैछन्, खोजशब्द खोजशब्द एसईओको महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्छ। ब्रान्डवाचका अनुसार गुगलमा प्रत्येक सेकेन्डमा ,०,००० भन्दा बढी खोजीहरू छन्। अब जब तपाईलाई थाहा छ कि धेरै व्यक्ति अनलाईन सूचनाका लागि खोजी गर्दैछन्, प्रयोगकर्ताहरूले के खोज्दैछन् भन्ने पत्ता लगाउनु तपाईंको मुख्य कर्तव्य बन्छ।
यस क्षेत्रमा सफल हुनका लागि, कीवर्डहरूको अनुसन्धान गर्दा मानिसहरूले गर्ने गल्तीहरू गर्नबाट जोगिनुहोस्। यसले तपाईंको साइटमा समय र ड्राइभ ट्राफिक बचाउनेछ। मूल रूपमा, खोजशब्द अनुसंधान तपाइँको रणनीति को आधारशिला हो। यदि तपाइँ तपाइँको लक्षित दर्शकहरु सम्म पुग्ने क्षमता बृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले जान्नु पर्छ कि मान्छेहरू के खोजिरहेका छन्।
मान्यता 3.. केवल उच्च खोजी भोल्युम कुञ्जी शब्दहरू लक्षित गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो अनलाइन उद्यममा सफल हुन चाहानुहुन्छ भने, जेनेरिक किवर्डहरूको लागि लक्षित धेरै समय खर्च नगर्नुहोस्। यसको सट्टामा, एक उपभोक्ता जस्तै उत्पादन वा सेवाको बारेमा जानकारी खोज्ने सोच्नुहोस्। प्रश्न र सर्तहरू पहिचान गर्नुहोस् जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको साइटमा लैजान्छ र रूपान्तरण बढाउन ती कुञ्जी शब्दहरूमा केन्द्रित गर्दछ।
मिथक Met. मेटा वर्णन प्रासंगिक छैन
मेटा विवरण SERPs मा तपाईंको सामग्री वर्णन गर्ने छोटो अनुच्छेद हो। अधिकांश व्यक्तिलाई अज्ञात, एक मेटा वर्णन पहिलो चीजहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंको साइट भ्रमण गर्ने वा नरहेको भ्रमण गर्ने निर्णयलाई प्रभाव पार्छ। यो आगन्तुकहरु को लागी एक उपयोगी हुक बनाउन, मेटा विवरण प्रासंगिक र आकर्षक बनाउनुहोस्।
मिथक 5.. यूआरएलहरूलाई श्रेणीक्रम वा कुञ्जी शब्दहरूको आवश्यक पर्दैन
हाल, गुगलले अनुक्रमित billion 46 अरब भन्दा बढी पृष्ठहरू छन्। यसले त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा भएको देखाउँदछ। यदि तपाईं एक त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन सोच्दछन् कि URL लाई अप्टिमाइजेसनको आवश्यक पर्दैन, तपाईले आफ्नो दिमाग बदल्नुहुनेछ किनकि दुवै खोज इञ्जिनहरू र प्रयोगकर्ताहरू स्पष्ट यूआरएलहरू मन पराउँछन्।
सामान्यतया, एक श्रेणीक्रमले तपाइँलाई तपाइँको पृष्ठहरू व्यवस्थित गर्न र उनीहरूको बिचको सम्बन्धको साथै तिनीहरूको महत्वलाई निर्धारित गर्न सक्षम गर्दछ। यो पृष्ठ रैंकिंग को सुविधा को प्रभाव छ। यहाँ, गोप्यताले उच्च गुणस्तर, अनुकूल यूआरएल प्रयोग गरीरहेको छ प्रयोगकर्तालाई उत्तम अनुभव।
अन्तमा, कुञ्जी शब्दहरूले तपाइँको साइटको लागि कार्य गर्नको लागि, तपाइँले निम्न गर्नुपर्दछ:
बक्स बाहिर सोच्नुहोस्। रचनात्मक हुन र कुञ्जीशब्दहरूसँग प्रयोग गर्न डराउनु हुँदैन जबसम्म तपाईंले साइटमा काम गर्ने सर्तहरू फेला पार्नुहुन्न।
उच्च खोज भोल्यूम कुञ्जी शब्दहरूको लागि लक्ष्य राख्नुहुन्न यदि उनीहरूले अपेक्षित परिणाम दिदैनन्। यसको सट्टा, कम रूपान्तरण सर्त गर्ने कम खोजी भोल्युम सर्तहरूमा लक्षित गर्नुहोस्।
तपाईंको अनसाइट सामग्री लि Link्क गर्नुहोस् र तपाईंको ए an्कर पाठको लागि सहि मेल प्रयोग गर्नुहोस्।
मेटा विवरणमा कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्नुहोस् र तपाईंको सामग्री वर्णन गर्न मद्दतको लागि अनुकूलन गर्नुहोस्।
स्पष्ट, मैत्री यूआरएलहरू र वर्गीकरण प्रयोग गर्नुहोस्।